गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
प्रत्येक मानिसको जीवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसका लागि मानिसले मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाँही सही मार्ग निर्देशनको कमीले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हाले सरी खेर जान्छ ।
हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले सफलताको कामना सहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले दश वटा सुत्रहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । यी सुत्रहरुको प्रयोगले तपाईको जीवन साच्चै नै सफल हुनेछ ।
१. सफल व्यक्तिको जीवनीबाट पाइने एउटा ज्ञान भनेको ‘स्याक्रिफाइज’ हो । त्यसैले केही ठूलो पाउन स–साना कुरा गुमाउन पर्छ भनेर नडराउनुहोस् । त्यस्तै टिभी, इन्टरनेट, अनावश्यक घुमघाम र खराब बानीबाट टाढा बस्नुहोस् र त्यस समयलाई अध्ययन तथा आवश्यकता अनुसार सही सदुपयोग गर्नुहोस् ।
३. लक्ष्यमा पुग्न आफूले कति बाटो हिड्न बाकी छ भन्दा पनि कति बाटो हिडिसके भनेर सधैभरी ख्याल राख्नहोस्। यसले एकातर्फ आफूले गरेको मेहनत सम्झाउँछ भने अर्को तर्फ लक्ष्यमा पुग्न थप उर्जा र प्रेरणा दिन्छ ।
४. मानिसलाई सफलताको लागि पैसाको पनि आवश्यकता पर्छ। आफू सँग भएको पैसा सधै सही ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्नु होस्।
त्यसैले नयाँ काम सुरु गर्नु अघी सबैभन्दा पहिले र ठुलो कुरा भनेको राम्रो आइडिया हो । राम्रो आइडिया पाउन निम्न आठ कुराको ध्यान दिनुहोस ।प्रयास गर्नुहोस, तर नडराउनुहोस : मनमा जे आइडिया आउछ त्यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुहोस तर पारीणाम सँग नडराउनुहोस। यसरी नै सफल आइडिया आउछ ।
मनिसहरु सँग भेट गर्नुहोस र नयाँ कुरा सिक्ने कोशीस गर्नुहोस : आफ्नो रुचिको बिषयमा किताब वा इन्टरनेटमा पढ्नुहोस र सो बिषयमा जानाकार ब्यक्तिहरुसँग भेट गरी कुरा गर्ने कोशीस गर्नुहोस् । उनिहरुको सोच के-कस्तो छ जान्ने कोशीस गर्नुहोस।
स-साना समस्या पनि हल गर्नुहोस : प्रय स-साना समस्याहरु हामी नजर अन्दाज गरेर जान्छौ । सफलताको लागि यो बिल्कुल घातक हुन्छ। त्यसैले स-साना समस्या पनि समाधान गरेर अघी बध्नुहोस । जसले तपाईंलाई अवस्य सफल बनाउनेछ।
बझांग घटना से*लाउन नपाउँदै सुनसरीमा पनि ११ बर्षिया बा*लिका माथि उस्तै घटना, ‘लै’ला’ले खोल्यो र*हस्य
दशैँ-तिहार नजिकिदै गर्दा भयो यस्तो ठुलो निर्णय…. जनता खुसी, कहिलेबाट हुन्छ लागु ?
तुरुन्तै हेर्नुस यस्तो छ को*रोना लागेकै ब्यक्तिको अनुभब | ‘रिपोर्ट पोजेटिब हुदैमा डराउनु पर्दैन